ခရီးသည် ပြောင်းလဲမှု 20.6% 17.3% 9.7% 8.7% 3.5%
↑ SilkAir names new chief executive။ Channel NewsAsia။ 30 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 13 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SilkAir Takes to the Skies inaSophisticated New Look။ 29 June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SilkAir to Fly to Cairns။6November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Press Release။ SilkAir။9January 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "SilkAir Joins Singapore Airlines to Offer Service to Denpasar" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ SilkAir။ 30 October 2014။ 24 September 2015 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ SilkAir to Fly to Semarang and Makassar။ 14 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SilkAir to stop flying in Solo in Central Java, Indonesia။ AsiaOne News (7 August 2014)။ 27 September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SilkAir Takes Off for Yogyakarta။ 23 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "SilkAir Places New Order For 20 Airbus A320 Planes, To Meet Growth And Fleet Renewal" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ SilkAir။ 20 December 2006။ 29 September 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Boeing, SilkAir Begins Transition to All 737 Fleet Archived 22 February 2014 at the Wayback Machine." SilkAir. retrieved6February 2014.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆစ်အဲ_လေကြောင်းလိုင်း&oldid=742748" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။